WARARKII WARGAYSA OGAAL EE MAANTA OO SABTI AH 07/02/209 | Toggaherer's Weblog
Hargeysa (Ogaal) – Wefti uu horkacayo Ganacsadaha Sucuudiyaanka ah ee Saleebaan Al Jabiri ayaa shalay ka soo degay magaalada Berbera, Islamarkaana waxa uu u soo gudbay magaalada Hargeysa oo lagu waddo inuu kulamo kula yeesho Madaxweyne Rayaale.
Sida uu ku soo waramayo Wariyaha Ogaal ee Gobolka Saaxil, Mr Jabiri ka hor intaanu u soo gudbini Hargeysa waxa uu shalay kor-meer ku soo maray Maxjar loogu tala-galay xanaaneynta Xoolaha oo uu halkaa ka dhisay, waxana kormeerkan ku wehelinayay Badhasaabka Gobolka Saaxil Maxamed Cabdilaahi Iyo Maareeyaha dekada Berbera Cali Xoor-xoor.
Warku waxa uu intaa ku daray in Mr, Al-Jabiri Somaliland u yimi sidii ay xukuumada uga wadda hadli lahaayeen sidii looga shaqeysiin lahaa Maxjarkan ee ay u sii mari lahaayeen xoolaha ka dhoofa Berbera ee u sii jeeda Imaaradka Carabta.
Warku ma sheegin goorta la doonayo in la furo Maxjarkan, hase ahaatee, wariyaha Ogaal ee Saaxil waxa uu sheegay in maal-maha soo socda la filayo in loo sameeyo Xaflad xadhiga lagaga jarayo oo ay ka qayb-galayaan Masuuliyiin ka socda Xukuumadu.
Dhawaan ayay xukuumadu u ogolaatay Ganacsatada madaxabanaan inay si toos ah Xoolaha uga raran karaan Dekada Berbera, ka dib markii buuq badan uu dhaliyay heshiis Xukuumadu ugu xidhay dhoofka Adhiga ka baxaya dekada Berbera Ganacsade Saleebaan Al-jabiri.
Haatana waxa la is weydiin karaa, dhameystirka hawsha Maxjarkani maxay ka bedaleysaa Ganacsigii dhoofka Xoolaha,? sideese ay u arkaan Safarkan cusub ee Saleebaan Al-jabiri Ganacsatada kooto diidka ahi?
Gudoomiyaha guddiga ganacsatada Xoolaha ee ka soo hor jeeday heshiiskaa hore ee mudadiisu dhamaatay, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Awal-bari) oo wargeyska Ogaal khadka Telefoonka wax kaga weydiiyay su’aalahan kor ku xusan iyo ugu horeyn waxa ay kala socdaan safarka Al-jabiri ku yimi Somaliland ayaa waxa uu sheegay inaanay waxba kala socon, islamarkaana ay filayaan inaanu u socon dib u soo celinta heshiiskii kootada. “Waxaan u maleynayaa, inaanu arrintaa hore muranku ugu dhashay, waayo Xoolihiiba Jabuuti ayay ugu wadda tagaan, wax lugeeya iyo wax Berbera ka dhoofaba, markaa taa umma baahna.” Sidaas ayuu yidhi Cabdiraxmaan Awal Bari waxana uu intaa ku daray oo uu sheegay in Xooluhu markii horeba Maxjar la’aan ku tegi jireen Dalka Cumaan iyo Dubay, haatana haduu arrintaa Saleebaan Al-jabiri u socdo aanay macno lahayn balse laga doonayo inuu fuliyo balan-qaadkii ahaa inuu Maxjarku ku xidhayo Xoolaha Somaliland Dalka Sucuudiga. “Imikaba waa la geeyaa Dubay iyo Cuman awalna waa la geyn jiray, Maxjarkanina mid wax anfacaya maaha, ujeedaduna waxay ahayd in uu Xoolaha ku xidho Sucuudiga hadii aanay tii jirina macno sameyn maayo.” Sidaas ayuu yidhi Awal-bari.
waxaana uu intaa ku daray, isaga oo ka jawaabaya su’aal laga weydiiyay dhaq-dhaqaaqa Ganacsiga xoolaha wakhtigan oo uu yidhi “Xoolihii immika waa xor oo qiimaha neefka nin waliba wixii uu u gooyo ayuu siistaa sidii Baayacmushtarku ahaan jiray, ee maaha xoolo kooto ah oo cid u xidhan oo nin $30 dolar cid ugu xidhan ama qiimo loo gooyay nin ugu xidhan waa qof waliba nasiibkii nin Berbera ka dhoofiya nin lugeysiiya. Qiimihuna waa maalinba suuqu siduu yahay nin $ 50 ku hela nin lixdan ku hela waa xor dad badan oo ka ganacsadaana wey jiraan oo suuqa ku jiraa intii kootadu ka baxday hadaan imika lagu soo celin.”
Maadama Ganacsata Awal-beri Gudoomiyaha u yahay dagaal dhinaca ganacsiga ah oo hore dhexmaray Al-jabiri waxa aanu weydiinay waxa ay u jeedinayaan haatan oo uu Somaliland ku sugan-yahay. “Waxaanu leenahay oo u jeedineynaa Al-Jabiri, Maxjarkii aad ku boobtey xoolaha Somaliland waxaanu u baahanahay inuu noqdo sharcigiisu mid ku xidhma Jida oo uu Aqbalo Sucuudigu. Haddii Maxjarka Berbera ku xidhmi waayo, Sucuudiga oo marka laga raro Berbera ay toos u tegi waayaan Jida, Xoolihii ka raratay Berbera waa xoolo Somaliland kugu leedahay oo naga maqan.”
Wada-hadalo xasaasiga ah oo Maanta laga yeelanayo Arrimaha doorashada iyo Hagaanka xisbiga UCID oo London ka degay shalay
Hargeysa (Ogaal)- Guddoomiyaha xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe oo ay weheliyaan masuuliyiin sar sare oo ka tirsan xisbigaas, ayaa shalay gelinkii dambe ka degay magaalada London ee cariga Ingiriiska.
Weftigan oo subaxnimadii shalay ka dhoofay Madaarka Berbera, waxay maanta kulan la yeelan doonaan Jaaliyadda Somaliland ee ku dhaqan magaalada London. Afhayeenka xisbiga UCID Xassan Xusseen (Codyare) oo xalay Wargeyska Ogaal wax ka waydiiyay ujeedada socdaalka weftigan waxa uu sheegay in socdaalkoodu ka dambeeyay ka dib markii ay martiqaad ka heleen Laamaha xisbigaas ee Wadamada Yurub, isla markaana ay ka qaybgali doonaan munaasibad xisbigu ku muujinayo taageerayaashooda Yurub iyo u diyaargarawga doorashada soo socota. Weftiga uu hoggaaminayo Guddoomiyaha UCID, ahna Murashaxa Madaxweynaha Inj. Faysal Cali Waraabe waxaa ka mid ah; Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) oo xubin ka ah hoggaanka xisbiga, Murashaxa Madaxweyne Ku-xigeenka Dr. Maxamed-Rashiid Sheekh Xassan, Guddoomiye Ku-xigeenka Aadan Maxamed Mire (Waqaf), Xil. Naasir Xaaji Cali Shire iyo Xoghayaha Arrimaha dibadda xisbigaas Axmed Fagfagaash.
Dhinaca kale, wakiilo ka kala socda saddexda xisbi, Komishanka doorashooyinka iyo hay’adda Interpeace ayaa la filayaa inay maanta kulan ka yeeshaan abuurida Xeer wada-shaqayneed oo ay ka yeelanayaan waxa laga yeelayo Diiwaangelinta. Sida uu Ogaal u xaqiijiyay Afhayeenka xisbiga UCID Xassan Xusseen (Codyare), waxay kulankooda maanta ku lafoguri doonaan qorshaha ay ka yeelan doonaan Diiwaangelinta iyo sida loo xalilayo khaladaadkii ka soo baxay Diiwaangelinta, marka lagu shubayo Kambuyuutarka kala-shaandhaynta dadka laba jeer codeeyay. Waxa uu xusay in xisbiyada Mucaaradka ee UCID iyo Kulmiye ka midaysan yihiin inta badan qodobadda Xeerka (Code of Conduct), marka laga hadlayo waxa laga yeelayo dadka hal mar wax ka badan isdiiwaangeliyay. Hase yeeshee, waxa uu tilmaamay in xisbiga UDUB ku dheganyahay in dhammaan meesha laga saaro fursad dadka dhowrka jeer isdiiwaangeliyay loogu ogolaado codaynta, balse Mucaaradku aaminsan yihiin in qofkii hal mar wax ka badan isdiiwaangeliyay loo reebo hal mar uu codaynta kaga qaybgali karo, inta kalena laga tirtiro. Wuxuuna taas ku sababeeyay in aanay markii hore dadku fursad u helin wacyigelin lagu fahamsiiyo Diiwaangelinta, taas bedelkeediina ay jireen aragtiyo dadku qaateen oo ah inay qiimeeyaan tirooyinka deegaan kasta iska diiwaangelisay.
Af hayeenka UCID waxa uu sheegay in kulankan maanta ee laga yeelanayo arrintaasi Axsaabta uga qayb geli doonaan mid sadex xubnood, hase ahaatee muu carabaabin xubnaha UCID uga qayb galay maadaama inta badan hogaankii Xisbigu ku midaysan-yahay waftiga ka degay London shalay, kaasoo aan la ogeyn mudada ay joogi doonaan halkaas iyo inay uga sii gudbi doonaan wadamo kale.
“Carruurtayada Ku Kobcin Mayno Foojari”
M/Weyne ku xigeenka
Hargeysa(Ogaal) – Madaxweyne ku xigeenka Somaliland Md. Axmed Yuusuf Yaasiin, ayaa sheegay in xukuumad ahaan ay doonayaan in meesha laga saaro dadkii hal mar wax ka badan is diiwaan geliyay si buu yidhi loo soo reebo inta xalaasha ah.
Madaxweyne ku xigeenka Somaliland ayaa wuxuu sidaasi ka sheegay xaflad qado sharaf ahayd oo ugu sameeyay ka qayb-galayaasha shirweynaha labaad ee xisbiga UDUB garabka xukuumadu ku qabsatay Huteelka Maansoor ee magaalada Hargeysa.
Madaxweyne ku xigeenka Somaliland wuxuu sheegay in bahda xisbiga UDUB ay iskaga yimaadeen gobolada dalka iyo daafaha caalamka oo dhan, waxaanu yidhi “waxaynu qorshaynay in shirweynaha saddexaad ee xisbiga UDUB gobol walba uu shirweynihiisa soo qabsado ka dibna la isugu yimaado, bahweynta UDUB, Somaliland, madaxweyneyaashii u horeeyey ee Somaliland mudane C/raxmaan Axmed Cali iyo Maxamed Ibraahim Cigaal waxay ahaayeen reer UDUB, 18-kii sano ee la soo dhaafay waxa Somaliland soo hagayay bahda xisbiga UDUB”.
Axmed Yuusuf Yaasiin oo ka hadlayay UDUB waxqabadkoodii wuxuu yidhi “xisbiga UDUB wuxuu qabtay oo uu shalay madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin, madaxweyne Afrikaan ahi aanu sahleen in lala tartamo oo doorashooyin la galo, oo uu daadejiyay maamulkii, maantana waxaynu qabanay hawshii diiwaangelinta rag badani ha carqaladeeyaan Somaliland markii deeq bixiyeyaashu inaanay bixin kharashkii diiwaangelinta ee gobolada Sool barri iyo Sanaag barri, xukuumadani waxay bixisay kharashkii ku baxay si aanu wadanku u kala go’in”.
Madaxweyne ku xigeenka Somaliland oo hadalkiisa sii watay wuxuu yidhi “Maanta waxa taagan in dad badani ku celceliyeen diiwaangelintii anagu haddii aanu nahay xukuumadii talada haysay wadanka u horseedi mayso inaanu carruurtayada ku kobcino foojari waa la shaandheynayaa, waxaanu garanay oo 20 milyan oo dollar loo geliyay in la helo xaqsoor, waxa la odhan jiray waa lagu shubtay maanta ragga iibsanaya kaadhadhka foojariga ah ee diiwaangelinta waxaan leeyahay lacagtiina ha iska khasaarinina”.
Xisbiga UDUB ayaa ku kala jabay shirweynaha labaad, iyadoo murashaxiin door ah oo sheegay in loo diiday ka qayb-galka shirweynaha dhinaca madaxtooyadu abaabulkiisa lahayd ay canbaareeyeen qaabka loo qabtay shirka. Islamarkaana ka barbar abaabulay mid kale oo aan ilaa hadda midho dhalin.
Gud. Midowga Afrika oo taageeray Budhcad-badeedda Soomaalida & Bangiyo London ah oo lagu eedeeyay gudbinta lacagaha madax-furashada
“Budhcad-Badeed maaha ee waxay difaacayaan Cuntada Caruurta Soomaaliyeed”
Addis-Ababa (Sapa-dpa/Ogaal)- Madaxweynaha dalka Libya, ahna guddoomiyaha cusub ee dhawaan loo doortay guddoomiyaha Midowga Afrika Mucamar Al-Qaddaafi ayaa taageeray Budhcad-Badeedda Soomaalida ee ka ugaadhsada Xeebaha Somalia, waxaanu ku tilmaamay tallaabo is-difaac ah oo ay kaga hortegayaan xaalufinta Dalalka reer Galbeedku ku hayaan Xeebaha Somalia.
Sida uu qoray Wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa dalka Kenya, Madaxweynaha Libya ayaa isaga oo ku sugan Xarunta Midowga Afrika ee magaalada Addis-Ababa, waxa uu ku tilmaamay Budhcad-Badeedda Soomaalida kuwo difaacaya Cuntada Caruurta Soomaalida ah ee Badda ku jirta. “Maaha Budhcad-Badeed ee waa is-difaacayaal, waxaanay difaacayaan Cuntada Caruurta Soomaalida.” Ayuu yidhi Madaxweynaha Libya, waxaanu intaa ku daray oo uu yidhi, “Waxay jawaab u yihiin (Budhcad-Badeeddu) Hunguri-waynayaasha reer Galbeedka ku soo duulay, isla markaana si sharci-darro ah u guranaya khayraadka Biyaha Soomaaliya. Taageeradan uu Madaxweynaha Libya taageeray Budhcad-Badeedda Soomaalida ayaa ku soo beegmay maalin ka dib markii ay Kooxaha Budhcad-Badeedda Soomaalida ahi sii daayeen Markab siday Hub iyo saanad Milatari oo muddo saddex bilood ah u afduubnaa, ka dib markii ay Saddex Milyan oo Dollar oo Madax furasho ah ka qaateen.
Dhinaca kale, sida lagu faafiyay shabakada wararka ee The spectator.com, warbixin kooban oo uu daadihinayay weriye lagu magacaabay James Forsy, ayaa waraysi xiise leh hore ula yeeshay Andrew Mwangura oo ah ninka isku-duba-rida sii-daynta maraakiibta iyo doonyaha lagu qafaasho xeebaha Soomaaliya. Kaas oo haatan xukun-suge ku ah dalka Kenya ayaa ka hadlay doorka ay magaalada London ka qaadato lacag-ka-bixinta maraakiibta la afduubo. “Inta badan lacagta la bixiyaa ma joogto Soomaaliya. Isla markaana dhalinyarada qoryaha sitaa (budhcad-badeeda) waa askar lugaynaya uun. Hase ahaatee, hogaamiyeyaashoodii waxay kala joogaan Kenya, Saudi Arabia, Ingiriiska iyo Kanada. Mana fududa in ninka Afrikaanka caadiga ah uu awoodo dooni mishinadeedu waawayn yihiin. Waxaanay noqonaysaa in laga maalmgeliyo meelo ka baxsan Soomaaliya.” Weriyaha warbixintan ayaa is-waydiiyay, “Sidee ayay lacaguhu uga yimaadaan kambaniyada maraakiibta leh ee ay u gaadhaa budhcadda?” “Bixinta lacagaha madax-furashada ahi waxay badanaaba tagtaa Nairobi, Mombasa iyo caasimado Yurub ka tirsan, khaasatan London. Waxaan maqlay inay jiraan bangiyo London ku yaala oo lacagahaas gudbiya iyo weliba qaabkii qadiimiga ahaa ee shandadaha in inta lagu qaado lala raaco diyaaradaha ama maraakiibta.”
Sh. Shariif: Mudaynta magacaabista ra’iisal wasaaraha iyo dedaalkiisa xasilooni-raadinta Somalia oo lagu daray aqoonsiga Somaliland
“Dariiqa kaliya ee lagula tacaali karo Al-Shabaab waa wada-hadal”
“Waxaanu u midawnay sidii aanu uga horjeesan lahayn dawlad Sh. Shariif Somalia ka dhiso oo reer galbeed taageersan”
Afhayeenka Xisbiga Islaamka
Jabuuti (Xinhua/Aljazeera/Ogaal)- Madaxweynaha dhawaan loo doortay Somalia Shariif Sh. Axmed, ayaa ka hadlay waqtiga uu Somalia u Magacaabayo Ra’iisal-Wasaare cusub, isla markaana hirdan loogu jiro jagaddaas ayaa ka socda huteelka uu ka degen yahay magaalada Jabuuti iyadoo weli kooxaha islaamiyiinta uu ku dhawaaqay inay wadahadlayaana ay u qalab urursanayaan sidii ay uga horjeesan lahaayeen.
Sida aanu ka soo xiganay Shabakadda Wararka Shiinaha ee Xinhua, Shariif Sh. Axmed ayaa sheegay inuu soo dhisi doono Dawlad ay ka qayb qaataan dhinacyada Siyaasadda ee Somalia, isla markaana uu ugu yeedhay mid loo dhan yahay. Waxaanu dadka reer Somalia iyo Beesha Caalamkaba ugu baaqay in ay taageeraan Dawladdiisa. Sh. Shariif Sh. Axmed oo shalay Shir-jaraa’id ku qabtay Magaalada Jabuuti oo uu ku sugan yahay, ayaa ka hadlay waqtiga iyo goorta uu magacaabayo Ra’iisal-Wasaare. “Waxaanu maalmaha soo socda ku dhawaaqi doonaa Ra’iisal-Wasaaraha Somalia, waxaanan rejaynaynaa inuu noqon doono mid awood u leh hanashada dalka iyo xaaladda uu hada ku jiro, si loo sameeyo Dawlad midaysan oo loo dhan yahay.” Ayuu yidhi Sh. Shariif Sh. Axmed oo Warbaahinta ugu waramayay Magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti. Huteelka uu Jabuuti ka degen yahay Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa siduu baahiyay Taleefishanka Aljazeera waxa loolan adag loogu jiraa ciddii uu u dooran lahaa Ra’iisal Wasaarihiisa. Cali Khaliif Galaydh oo sida la aaminsan yahay ka mid ah dadka loo filayo inuu jagadaa u magacaabo, ayaa isaga oo ka hadlayay carqaladaha hor-yaala dawlada Sheekh Shariif wuxuu yidhi, “Waxa jira carqalado badan oo aanay dawladani ka dhaqaaqayn. Ma haystaan saldhig amaan ah, boolis ma haystaan, cashuur ma ururin karaan, markaa waa inay beesha caalamku sida ugu dhakhsaha badan u suurageliyaan taageerooyinka ay dawladani u baahan tahay.” Sida ay baahisay Shabakadda wararka Shiinaha ee Xinhua, Madaxweynaha loo doortay Somalia wuxuu dhawaan aqbalay in la dhexdhexaadiyo Maamulkiisa la filayo inuu soo dhiso iyo Kooxaha ka dagaallama Somalia ee ay ugu horreeyaan Al-Shabaab, waxaanu ugu baaqay inay dagaallada joojiyaan, isla markaana ay wada-hadal la galaan isaga. “Maaha waqtigii Dagaalka ee waa waqtigii nabadda la taageeri lahaa. Waxaan aaminsanahay dariiqa kaliya ee lagula tacaali karaana (Al-Shabaab) waa wada-hadal iyo wada-xaajood, si loo wada hadlo.” Ayuu yidhi Sh. Shariif, waxaanu intaa ku daray oo uu yidhi, “ Maanta Somalia qof kastaa wuxuu isu-haystaa in uu isagu ama iyadu saxsan yahay, diyaarna uma aha wada-hadal. Waa inaynu bedelnaa dhaqankaas oo si wada-jir ah u fadhiisaana, isla markaana wada-hadalnaa oo xal u raadinaa dhibaatooyinkeena. Taas ayaa ah tallaabada kaliya ee hore loo qaadi karo. Waa inaanu ka fogaanaa wax kasta oo khilaaf kale keenaya.” Hase yeeshee, kooxaha islaamiyiinta Soomaaliya ayaa si ay u dagaalamaan ku midoobay dawlad keliya. Warbixin lagu faafiyay shabakada wararka Idaacada VOA-da ayaa lagu sheegay in kooxaha islaamiyiinta qaarkood ku midoobeen urur loog yeedhay ‘Xisbiga Islaamka.’ Afhayeenka xisbigaas Xasan Mahdi ayay warbixintu sheegtay inuu Sheekh Shariif ku dhaleeceeyay ka-qaybgalka shirkii Jabuuti ee Qaramada Midoobay wadeen. Waxaanu shaaca ka qaaday afhayeenkaasi in loo aasaasay Xisbiga Islaamka sidii ay uga horjeesan lahaayeen dedaalo ay ku tilmaameen inuu Sheekh Shariif ku doonayo sidii uu Soomaaliya ugu rogi lahaa wadan cilmaaniyad lagu maamulo oo dawladiisuna taageerto reer galbeedka.
Ururka Al-shabaab oo Sheekh Shariif ku eedeeyay inuu noqday islaami furfuran, ayaa iyaguna ku dhawaaqay inay dagaalka sii wad